Stepper maotera fanaraha-maso dia fitaovana izay mifehy ny toerana, ny hafainganam-pandeha sy ny Torque fahazarana fotsiny ny fiara. Izany dia natao ho an'ny fanaraha-maso ny herinaratra mihetsika Motors. Manana fifindran'ny mandeha ho azy sy ny boky Hanombohana ary nijanona ny maotera, sy ny fifantenana sy ny fanitsiana ny hafainganam-pandeha. Antenaina koa se ...
Stepper Motors matetika ny microprocessors na fanao ICs-maso, sy ny hery no matetika faritra fehezin'ny lit stepper moto transistors mpamily sy ny hery. Marina hetsika azo atao, fa ny fahasarotana tany matetika stepper mpankafy ao amin'ny "angamba indray andro any" Ben faritra. Fa stepper ...
Stepper maotera kely mihetsiketsika ao dingana voalaza teo ireo amin'ny ankapobeny ny marika eo amin'ny ambaratonga. Ny dingana maotera mba mihodina amin'ny lalana iray ny amin'izao fotoana izao dia nitety ny coil, dia iray hafa, dia tao amin'ny rivotra, mankao voalohany ny mifanohitra polarity, dia ny faharoa amin'ny mifanohitra polarity, ihany koa. Io no dingana miverimberina for C ...